Ezalor Njikwa Nnweta Ihu 3D - Imewe Mmewe
Njikwa Nnweta Ihu 3D
Njikwa Nnweta Ihu 3D Zute otutu ihe mmetụta na sistemụ nnweta igwefoto, Ezalor. A na-enyocha algọridim na kọmputa mpaghara maka nzuzo. Teknụzụ na-egbochi mpịakọta iji gbochie ihe mkpuchi ihu. Igwe ọkụ na-esicha ike na-eweta nkasi obi. N'iji anya, ndi oru nwere ike banye ebe ha huru n'anya. Nchọpụta a na-emetụ aka adịghị eme ka ọ dị ọcha.
Aha oru ngo : Ezalor, Aha ndị na-emepụta ya : Huachao Gong, Aha onye ahịa : Sciedi Technology Co., Ltd..
Nchebe ngwaahịa na nchedo ngwaahịa
Njikwa Nnweta Ihu 3D Huachao Gong Ezalor